Etu esi wụnye ma jiri Windows 10 kpam kpam n'efu | Akụkọ akụrụngwa
Ụlọ Ignatius | | Kọmputa, Nkuzi
Windows 10 bụ otu n'ime ụdị Windows kachasị mma nke Microsoft malitere na ahịa, ọ bụrụ na anyị atụnyere ya oke ọdịda nke Windows 8 na Windows Vista n’agaghị aga n’ihu, ebe Windows 7 na Windows XP bụ ihe atụ ndị ọzọ dị mma nke Microsoft mgbe ọ chọrọ, mee ihe n’ụzọ ziri ezi. Windows 10 bụ ngwakọta nke kacha mma nke Windows 7 na Windows 8x kachasị mma, nke, ọ bụ ezie na o siri ike ikwere, nwere ezigbo ihe.
Windows 10 kụrụ ahịa ahụ n'oge ọkọchị nke afọ 2015. N'ime afọ mbụ ya na ahịa, Microsoft nyere ndị ọrụ niile nwere ikikere Windows 7 ma ọ bụ Windows 8.x dị irè iji kwalite Windows 10 kpamkpam n'efu, na-eji ikike nọmba ahụ. nke ụdị Windows ndị ahụ. Ma mgbe afọ mbụ gafere, ọ gaghịzi ekwe omume ịme ya. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị na-egosi gị obere aghụghọ ị ga-enwe ike budata Windows 10 n'efu na Spanish zuru ezu na ikikere izizi.
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu, na site n'oge ruo n'oge Microsoft na-enye anyị ohere debanye aha anyị nke Windows 10 n'iji ikikere Windows 7 ma ọ bụ Windows 8.x,, ị kwesịrị ịmụrụ anya iji nwee ike iji ohere a mee ihe, ebe Microsoft anaghị ekwupụta ya nke ukwuu, mana ọ bụ ndị ọrụ n'onwe ha ghọtara ya na agbanyeghị na ha na-anwa ime ka ọ rute ọtụtụ ndị ọrụ dị ka o kwere mee, ha na-abịara anyị ebumnuche ha.
1 Ego ole ka Windows 10 na-efu
1.1 Windows 10 na-akwụ ụgwọ
2 Gịnị bụ Windows Insider
3 Otu esi esonye usoro Insider
4 Insider mmemme uru
5 Kọ ihe ụfọdụ nke Insider mmemme
Windows 10 na-enye anyị usoro nke ụdị Windows maka kpuchie mkpa niile nke ndị ọrụ na ụlọ ọrụ, ma ndị nwere mmasị n’ezie ndị ọrụ bụ nsụgharị Homelọ na Pro. Ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ ụdị nke Home, ọ bụghị naanị n’ihi na ọ bụ nke anyị nwere ike imelite maka n'efu n’afọ mbụ, mana n’ihi na ọ na-ekpuchikwa mkpa niile nke ụlọ. ọrụ.
Mana ọ bụrụ maka ọrụ anyị ma ọ bụ mkpa pụrụ iche, anyị chọrọ nsụgharị nwere ọtụtụ ọrụ, dị ka njikọ na kọmputa dịpụrụ adịpụ, mbipute Pro bụ ihe anyị chọrọ. Ọnụahịa maka nsụgharị Homelọ na Pro nke Windows 10 bụ ndị a.
Windows 10 na-akwụ ụgwọ
Windows 10 Home ọnụ na Storelọ Ahịa Microsoft maka 145 euro.
Windows 10 Pro ọnụ na Storelọ Ahịa Microsoft maka 259 euro.
Gịnị bụ Windows Insider
Ọnwa ole na ole tupu mwepụta nke ikpeazụ nke Windows 10 n'oge ọkọchị 2015, ụlọ ọrụ ndị Redmon kwupụtara mwepụta nke a mmemme betanke mere na ndị ọrụ niile nwere mmasị ịnwale ụdị Windows ndị ọzọ nwere ohere ịme ya. A na-akpọ mmemme beta ọha Microsoft a Windows Insider.
Windows Insider na-enye anyị ohere ịwụnye nke ọ bụla n'ime Windows 10 ọnwa, ọnwa tupu a hapụ ha na nke ikpeazụ ha. Mmemme a na-enye anyị nhọrọ nkesa abụọ nke anyị nwere ike ịdebanye aha iji nweta mmelite ọhụrụ ahụ tupu ha erute ahịa na nsụgharị ikpeazụ ha.
N'otu aka anyị nwere mgbanaka ngwa ngwa. Mgbanaka a na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ọhụụ ọhụrụ nke Windows 10 ozugbo anyị gafere Microsoft filter, yabụ ọ bụ ndị ọrụ ọrụ ga-akọrịrị chinchi niile ha hụrụ n'oge ọrụ ha. Ebe ọ bụ na ọ bụghị ụdị nke a na-egbu maramara, ọ ga-abụ na anyị ga-ezute ọtụtụ nsogbu arụmọrụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ bụ nnukwu melite.
El ngwa ngwa mgbanakaỌ bụ ụzọ anyị ga-esi anụ ụtọ akụkọ banyere Windows 10 tupu ya abata na ahịa. Ndị ọrụ bụ akụkụ nke mgbanaka a na-enweta nsụgharị na-egbu maramara nke ọhụụ dị ugbu a, ya mere ọnụ ọgụgụ chinchi na-ebelata nke ukwuu. Ihe owuwu niile rutere mgbanaka a, agafeela mgbanaka ngwa ngwa. Ugbu a ihe niile dabere na ọgba aghara ị nọ na ịnụ ụtọ atụmatụ ọhụrụ na Windows 10 gị.
Otu esi esonye usoro Insider
Ọ bụrụ na anyị etinyebeghị Windows 10 dịka anyị enweghị ikikere mana anyị chọrọ ịnwale ozi niile ọ na-ewetara anyị gbasara nsụgharị ndị gara aga, nke mbụ anyị ga-aga na weebụsaịtị Microsoft nke anyị nwere ike budata ụdị nke ISO na anyị chọrọ iji wụnye na mepụta USB buut komputa anyi ma tinye ya.
N'oge usoro nwụnye, mgbe ịchọrọ nọmba ikike, anyị ga-pịa ala nke mpio ahụ na enweghị m ikike, nke mere na mafere usoro ahụ ma anyị nwere ike ịga n'ihu na nwụnye n'ime otu anyị. Ozugbo echichi ahụ mechara, Microsoft na-enye anyị ohere iji ọrụ niile nke Windows 10 na-enweghị mmachi ruo ụbọchị 30, emesịa ọ gaghị enye anyị ohere ịnweta ntọala nhazi Windows.
Ebe etinyere kọọpị anyị, anyị na-aga nhọrọ nhazi Windows site na cogwheel dị n'akụkụ aka ekpe nke menu mmalite. Na-esote, pịa na Mmelite na Nche. Na kọlụm aka ekpe, pịa Mmemme Windows Insider na na nri n'igbe pịa na Malite.
Ọzọ, Windows 10 ga-ajụ anyị ka anyị tinye akaụntụ email nke anyị chọrọ ijikọ mmemme nke Insider. Nke a ga-esite na Microsoft, ma @outlook, @ hotmail ... Nkịtị bụ jikọtara akaụntụ nnabata Windows anyị nke anyị chọrọ iji mmemme nke Insider.
Ọzọ, anyị ga-ahọrọ ụdị mgbanaka anyị chọrọ ịbụ akụkụ. Anyị ga-ahọrọ Zitere m mmelite ndị mbụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịbụ akụkụ nke mgbanaka ngwa ngwa (anaghị atụ aro ya) ma ọ bụ Versiondị Windows na-esote, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịbụ akụkụ nke ngwa ngwa mgbanaka (nhọrọ akwadoro).
N'ikpeazụ, Windows ga-aga n'ihu ibudata usoro nke faịlụ ma gwa anyị ka anyị malitegharịa kọmputa ahụ. Usoro a ọ nwere ike iwe ogologo ogeỌbụghị naanị na ịnwere ibudata faịlụ, mana ị ga-etinyerịrị ha tupu ịmalitegharịa Windows, yabụ nwee ndidi.
Insider mmemme uru
Isi uru nke mmemme a na-enye gị bụ na anyị nwere ike ịnụ ụtọ ozi niile Microsoft ga-enye anyị na nsụgharị Windows ndị ọzọ. Uru ọzọ, nke ahụ nwere ike iduga gị n'isiokwu a bụ na anyị nwere ike were nnomi iwu nke Windows 10 na-enweghị mgbe ịdebanye aha otu Ohere ma ọ bụ amanye ịzụta ikike.
Kọ ihe ụfọdụ nke Insider mmemme
Dịka akụkụ nke mmemme Windows 10 beta, oyiri anyị nke nsụgharị a ga-egosi anyị na akuku ala nke desktọọpụ ihe ederede na mbipute anyị na-anwale yana nọmba ụlọ. Ederede a n’agbanyeghi ma ị gbanwere akwụkwọ ahụaja ma ọ bụ na ọ gbanwee.
Ihe ọghọm dị na mmemme a na-enye anyị bụ na anyị nwere ike ịta ahụhụ enweghị nsogbu na otu anyị, ebe ọ bụ na ọ kwụsịghị ịnwa ịbụ beta, nke nwere ike ibute na ọ bụrụ na anyị na-arụ ọrụ dị mkpa, ọ nwere ike ịla n'iyi ma ọ bụrụ na anyị akpacharaghị anya na anyị na-echekwa otu ihe anyị na-eke.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji Windows 10 na-enweghị na-aga site na igbe, mgbe anyị debara aha na a usoro, anyị ga-esonyere nwayọ nwayọ, ebe ewuru ndị gabigararịị na mgbanaka ngwa ngwa na-abata mgbe nile na tupu ha eruo ya e doziela njehie achọtara, ya mere ọ fọrọ nke nta ka ọ kwụsie ike. Na mgbakwunye, ọ bụ ọtụtụ oge, nsụgharị nke mgbanaka dị nwayọ bụ nke mechara rute ndị ọrụ njedebe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Etu esi wụnye na jiri Windows 10 kpam kpam n'efu